Lightweight Kufamba Wiricheya
Lightweight Kufamba hwiricheya
Kureruka kufamba hwiricheya ndiwo Kutakura Wiricheya iyo ine yakareruka furemu uye akawanda maficha ayo akajairika pavatakuri.
Chiedza kufamba mavhiripu akakosha pakufamba kwemugwagwa uye nzendo dzekufamba, unogona kuenda chero kupi neKufamba chigaro, furemu iri nyore uye yakapusa kupeta nekuchengetedza, mhando iyi hwiricheya inokwana nyore mukati mehunde yemotokari yako, kana kana uri kufamba nendege, bhazi, kana chitima.
Isu tinopa Lightweight kufamba mavhiripu izvo zvakavimbika uye zviri nyore kutakura kana kupeta, yedu Kutakura Wiricheya Series inosanganisira kufamba mavhiripu izvo zvine zvakawanda zvakasarudzika maficha.
Isu tinotakurawo iyo yekutanga uye yakakwidziridzwa "Ndege hwiricheya”, Iyo inoshandiswa chaizvo pakufamba nendege, zvichireva kuti yakanga yakagadzirirwa kukwana mundege, nepakati pemikoto nepamusuwo, uye nepabhiriji.
Ndege yedu hwiricheya ndiro KNTV10A, inongori shasha yehuremu hweminhenga yeese super lightweight kupeta macheya ekufamba pamusika. Yakagadzirwa kuti igare yakasimba, uye inokwanisika, ine patented 6061 T-6 ndege-giredhi aluminium furemu.
Karman kufamba hwiricheya inopa kurerukirwa kukuru, nyaradzo, uye chengetedzo. Kuchengeta, ingo peta uchidzosera tsoka dzetsoka, svina iyo yekukurumidza-kuburitsa danho pane yekusunda mubato uye peta, zviri nyore kudaro!
Kunyangwe iwe uri kuenda kune nyika, kana kungoenda kunze ku Starbucks, unogona kuenda chero kupi neRedu Lightweight Travel hwiricheya, kukupa yose kuita zvinhu zvakasiyana-siyana uye kugona-kugona.
Chiedza Shamwari mavhiripu
Lightweight kufamba mawiricheya inonziwo "Lightweight Companion Chairs" nekuti iine mavhiri madiki epamberi, dzimwe nguva mavhiri ekumashure akaenzana nemavhiri ekaster kumberi. Shamwari dzekufambisa sachigaro dzinochengetedzwa, zvichireva kuti mumwe munhu anofanira kusundira kubva kumashure.
Vamwe vashandisi vanofarira kusimudzira chigaro nemakumbo avo, kuti vafambise chigaro vari vega pasina anodikanwa nemuchengeti.
Macheya ekufamba akareruka anowanzo kupeteka, senge KNTV10A, kupetwa kwemhando idzi dzemacheya ndechimwe chezvinhu zvavo zvakakosha, nekuti inobvumira mushandisi kupeta cheya nekuichengeta munzvimbo dzakamanikana uye diki, senge mukamuri yendege.
Iyo TV10A kufamba hwiricheya
SKU: KN-TV10A Categories: Ultra Lightweight Wiricheya, Kutakura Mawiricheya, Wiricheya isingaremi, Vanotenderera & Vanofamba, Vanotenderera Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Aiden (Zvinosimbiswa muridzi) - July 6, 2021
Chigadzirwa chakazara chakazara.
Isaac (Zvinosimbiswa muridzi) - July 6, 2021
Mason (Zvinosimbiswa muridzi) - October 6, 2020
Zvakanyatso kukodzera mari.
Robert (Zvinosimbiswa muridzi) - April 18, 2020
Tyler (Zvinosimbiswa muridzi) - December 28, 2019
Ryder (Zvinosimbiswa muridzi) - November 23, 2019
Aadarsh (Zvinosimbiswa muridzi) - June 2, 2019
Kayden (Zvinosimbiswa muridzi) - Dai 5, 2019
Nathaniel (Zvinosimbiswa muridzi) - March 30, 2019
Very kutsanya pakusununguka.
Nathaniel (Zvinosimbiswa muridzi) - November 23, 2018
Camden (Zvinosimbiswa muridzi) - September 5, 2018
Edward (Zvinosimbiswa muridzi) - August 4, 2018
Phoenix (Zvinosimbiswa muridzi) - November 17, 2016
Amazon.com - September 2, 2016
Ichokwadi chaizvo munzira dzakawanda! Iko kupeta kusimuka kwechikamu ichi kunotyisa! Zviri nyore kusunda uye kuendesa uye Lucille ane zvishoma kunetseka kupinda nekubuda mairi! Iyo bhaa yetsoka iri nyore kwazvo kushanda nayo pane iyo floppy tsoka dzekutsika pane zvakajairika wheelchair! Lever yekuchenjera yakavanda yandaishandisa kuiputsa nekuivhara yaigona kuwanikwa kumberi kurudyi pane mubato zvichiita kuti zvive nyore kusvika! Bhara retsoka riri nyore kupeta pasi uye kumusoro zvichipa kuti munhu wacho haasati atogara pachigaro!
Richard (Zvinosimbiswa muridzi) - July 18, 2016
Charles (Zvinosimbiswa muridzi) - April 15, 2016
Henry (Zvinosimbiswa muridzi) - March 6, 2016
Patrick (Zvinosimbiswa muridzi) - March 26, 2015
Avery (Zvinosimbiswa muridzi) - March 26, 2013
wayfair.com - March 3, 2013
Kurema kwayo kurema, kuumbika uye nekukurumidza-zvakapetwa maficha inogadzira chigaro chekurota chekufamba, mumba-uye kunze kwemusha kune vanochengeta! Zvakareruka kutakura munzvimbo dzisiri-dzakapetwa nekuda kwehukuru hwemavhiri.
Isaac (Zvinosimbiswa muridzi) - February 7, 2013
Zohar (Zvinosimbiswa muridzi) - November 14, 2012
wayfair.com - October 28, 2012
karman ultralight yekufambisa chair
Ida chigaro ichi. Ichi ndicho chigaro chechipiri chandakatenga. Ndinoishandisa pakufamba nekutenga. Icho chakareruka uye chiri nyore kutakura mota.
Samuel (Zvinosimbiswa muridzi) - October 3, 2012
Mason (Zvinosimbiswa muridzi) - September 1, 2012
Owen (Zvinosimbiswa muridzi) - August 25, 2012
Liam (Zvinosimbiswa muridzi) - January 17, 2012
Ryker (Zvinosimbiswa muridzi) - January 11, 2012
Wdc-online.com - March 2, 2011
VANHU VANOMIRA PAMUSORO PEKUTAURA KUTI VABVUNZE KUTI NDAKATENGENGA PI SIYA IYI.
Ryan (Zvinosimbiswa muridzi) - December 22, 2010
Ryan (Zvinosimbiswa muridzi) - July 9, 2010
Jackson (Zvinosimbiswa muridzi) - June 14, 2010
usmedicalsupplies.com - December 5, 2009
Chirema chakareruka kuisa mutiraki remota diki. Nyore kusunda uye maneuver. Wanga uine chinetso chidiki mukumisa uye kutora pasi nekuti hapana mirairo uye dhizaini yakatumirwa mune izvo. Armrest yakanyanya kukwirira kuna amai mupfupi vane 4'6 ″. Zvirinani kuti ini ndishandise kana ndichienda kuna chiremba, pane kurodha kumusoro i30lb. wiricheya. Zvakare hazvikwanise kuwana hazvigone kupfuura nemumasuo madiki, isu tinofanirwa kumira uye kushandisa chinofamba icho.
Ryker (Zvinosimbiswa muridzi) - August 14, 2009
Kaden Arabic (Zvinosimbiswa muridzi) - Dai 4, 2009
Ryder (Zvinosimbiswa muridzi) - February 10, 2009
Bryan (Zvinosimbiswa muridzi) - January 22, 2009
Julian (Zvinosimbiswa muridzi) - Dai 19, 2007
Nicholas (Zvinosimbiswa muridzi) - June 2, 2006
Jackson (Zvinosimbiswa muridzi) - June 16, 2005
Camden (Zvinosimbiswa muridzi) - January 12, 2005
Isaac (Zvinosimbiswa muridzi) - October 3, 2004
Nathaniel (Zvinosimbiswa muridzi) - March 25, 2004
Alan (Zvinosimbiswa muridzi) - December 9, 2003
William (Zvinosimbiswa muridzi) - Dai 30, 2003
Leo (Zvinosimbiswa muridzi) - December 2, 2002
Liam (Zvinosimbiswa muridzi) - March 17, 2002
Phoenix (Zvinosimbiswa muridzi) - March 7, 2002
William (Zvinosimbiswa muridzi) - December 24, 2001
Ryker (Zvinosimbiswa muridzi) - October 14, 2001
Phoenix (Zvinosimbiswa muridzi) - June 7, 2001
Ryker (Zvinosimbiswa muridzi) - December 1, 2000
Charles (Zvinosimbiswa muridzi) - September 7, 2000
Alan (Zvinosimbiswa muridzi) - Dai 24, 2000
Leo (Zvinosimbiswa muridzi) - July 29, 1998
Riley (Zvinosimbiswa muridzi) - July 1, 1998
Ryan (Zvinosimbiswa muridzi) - July 26, 1997
Ryder (Zvinosimbiswa muridzi) - February 21, 1997
Anthony (Zvinosimbiswa muridzi) - June 3, 1996
Camden (Zvinosimbiswa muridzi) - January 20, 1996
Alan (Zvinosimbiswa muridzi) - September 1, 1995
Kayden (Zvinosimbiswa muridzi) - October 7, 1994
Ryker (Zvinosimbiswa muridzi) - August 12, 1994
Dylan (Zvinosimbiswa muridzi) - July 24, 1994
Karman hwiricheya Tie Down Kit PADDED RATCHET - Yakaumbwa ergonomic rabha inobata inopa yakasimba yakachengeteka kubata. Rubha yakavharwa kuburitsa trigger iri nyore kuburitsa pane inobata. VINYL YAKADZIDZWA S HOOKS- Inopa kurwisa kwekudzivirira uye inodzivirira kukwenya mitoro uye anchor pamusoro YAKASIMBA YAKASIMBIRA SUNGIRA- 100% Polyester TOP SELLERS